Nofeembar 21, 2019 waxay calaamad u tahay isbedelka weyn ee adduunka ee tababarka xirfadaha. Hadda, mahadsanid Koontadayda Tababbarka, adiga: shaqaalaha, shaqaalaha dawladda ama shaqo doonka, waxaad tihiin sayidyada kaliya ee jihaynta xirfadeed.
Fahamka dib u habeynta
Ka ogow dheelitirkaaga CPF, soo dejiso arjiga, iska diiwaan geli tababarka, iwm. Waxaan kuu haynay waxyaabaha muhiimka u ah inaad ogaato: soo hel dib u dhac la'aan!
Dib-u-habeynta tababarka xirfadeed: maxaa la xusuustaa! July 10th, 2021Tranquillus
horeMaxay Faransiisku (re) u bartaan qorista?
socdaSideed (dib) ugu bartaa qof weyn inuu si fiican ugu qoro Faransiiska?